हावामा हुने कार्बनबाट बने हीरा ! | News Polar
हावामा हुने कार्बनबाट बने हीरा !
न्यूजपोलार कार्तिक ०२, २०७८, मंगलबार
एजेन्सी । २५ हजार अमेरिकी डलर पर्ने यो हीरा हावामा हुने कार्बनबाट बनेको हो । एथेर डायमन्ड्सले भने- हावाबाट सङ्कलित कार्बनबाट हीरा बनाउने हामी पृथ्वीकै पहिलो र एक मात्र उत्पादक हौँ । यसको अर्थ हीरामा हुने कार्बनका प्रत्यक अणुले पृथ्वीलाई तताइरहेको थियो । कार्बन सोस्ने प्रविधिले हावाबाट कार्बन डाईअक्साइड छुट्टाउँछ।
यो ग्यास जलवायु परिर्वतनको ठूलो कारक तत्व हो । उहाँले भन्नुभयो, अहिले कार्बनबाट वस्तु निर्माण गर्ने कम्पनीहरुमा करोडौँ डलर लगानी गर्न थालिएको छ । त्यस्ता वस्तुमा हीरा, खेल सामाग्री र भवन निर्माण सामाग्री पर्छन् । हामीले थाहा पायौँ कि उपभोक्ताहरु पृथ्वीका लागि उपयोगी हुनेगरी उत्पादन गरिएका हाम्रा हीरालाई बढी मूल्य तिर्न तयार छन् । साथै यसले बजारमा हामीलाई एक प्रकारको प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति दिन्छ ।
तर अन्य विज्ञहरु कार्बन डाईअक्साइडको प्रदुशन कम गर्न जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । पृथ्वीको तापक्रम बढिरहँदा ८० करोड डलर लगानी भइसकेको हुँदा यो प्रविधि जलवायु परिर्वतनको छलफलको अंश बन्ने देखिन्छ ।
प्रकाशित : कार्तिक ०२, २०७८, १६:५५:४८
पेरुमा फेला पर्यो ८०० वर्ष पुरानो ममी
६ महिनासम्म मोबाइल फोन आन्द्रामै अड्किएपछि...
पशुपंक्षीबिनै जौको बोटमा मासु उत्पादन
इन्डोनेशियाली युवाले राइसकुकरसँग विवाह गरेपछि...